केही हप्तामै वितरण गरिने कोरोना खोपको प्रभावकारिता झण्डै ९५ प्रतिशत ! – khabermala
s ताजा समाचार प्रोफाईल स्टोरी
केही हप्तामै वितरण गरिने कोरोना खोपको प्रभावकारिता झण्डै ९५ प्रतिशत !
Newportalmala १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८	No Comments
वासिङटन : कोभिड १९ विरुद्ध तयार पारिएको खोपको प्रभावकारिता झण्डै ९५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाका अनुसार सार्वजनिक गरिने तयारीमा रहेको पाइजर भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशत नजिक रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । साथै उक्त खोपले कोरोना महामारी अन्त्य गर्नेमा आत्मविश्वास उत्पन्न भएको पनि कम्पनीले जनाएको छ । मोडेर्नाले यो तथ्य आउनुलाई ‘महान दिन’को रुपमा व्याख्या गरेको छ । साथै यसैलाई लिएर केही हप्ताभित्रै खोपको स्वीकृति लिनका लागि आवेदन दिने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
यद्यपि उक्त खोपको परीक्षणमा अमेरिकामा जम्मा ३० हजार मानिस सहभागी थिए । जसमध्ये आधालाई चार हप्ताको अन्तरमा दुई डोज खोप दिइएको थियो । र बाँकी खोप ‘डमी’को रुपमा थिए ।
र खोपको प्रभावकारिता भने पहिलो ९५ मा आधारित रहेर व्याख्या गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा खोपले ९४ दशमलब ५ प्रतिशत काम गरेको थियो ।
यस्तै ११ जना गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरुमाथि पनि खोप लगाउँदा उनीहरुलाई निको भएको र पछि समस्या नदेखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
‘समग्र प्रभावकारिता उल्लेखनीय छ । यो एक महान दिन हो,’ मोडेर्नाका प्रमुख मेडिकल अधिकृत ताल जाक्सले बीबीसीलाई बताएका छन् । मोडेर्नाका अध्यक्ष डा. स्टेफन होगले भने जब यसको नतिजा आयो अपत्यारिलो जस्तै लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भनेका छन्, ‘हामीमध्ये कसैले पनि कोभिडलाई रोक्न यो खोप ९४ प्रतिशत प्रभावकारी होला भन्ने आशा गरेका थिएनौँ, यो वास्तवमै आश्चर्यजनक जानकारी हो ।’
खोप कहिले पाइन्छ त ?
खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र कति वर्षको हुनुभयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने मोडेर्नाले जनाएको छ । साथै यो आगामी हप्ताहरुमै अमेरिकामा सुरु भने हुनेछ । र देशभर २ करोड डोज उपलब्ध गराउने पनि बताइएको छ ।
यस्तै आगामी वर्षसम्ममा विश्वभर १ अर्ब डोज प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने आशा राखेको कम्पनीले जनाएको छ । बेलायत सरकारले पनि कम्पनीसँग अझै सहकार्य गरिरहेको छ । जब कि, बेलायती खोप छिट्टो आउने ६ खोपमध्ये परेको छैन ।
सुरक्षित छ त ?
खोप कहिले आउला भन्ने जति चासोको कुरा हो, त्यत्तिकै मात्रामा यो सुरक्षित छ त ? भन्ने जिज्ञासा बढी छ । यस खोपबारे प्रमुख सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरिएको छैन । तर पारासिटामोल वाहेक अरु औषधि सतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैनन् ।
जस्तै कि, केही बिरामीलाई खोपपछि पनि टाउको दुख्ने, अरु दुखाइ र थकान जस्ता समस्या छोटो समयका लागि देखिनसक्ने सम्भावना रहन्छ । तर विज्ञहरु के भन्छन् भने यस खोपबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता र अरु जे अपेक्षा गरिएको हो त्यसका लागि चाहिँ यसले काम गर्नेछ ।
संक्रामक रोग सम्बन्धी अमेरिकी विज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप आइसकेपछि पनि सामाजिक दूरी र मास्क आवस्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
‘म सबै जनतालाई सिफारिस गर्छु कि, तपाईँहरुलाई खोप लगाइएकाले सार्वजनिक स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन नगरिदिनूहव्ला,’ फाउचीले भने ।
एलर्जी तथा संक्रामक रोग सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थानका निर्देशक समेत रहेका डा. फाउचीले खोप लगाइसकेपछि पनि शारीरिक रुपमा असहज अवस्था हुने भएकाले सचेत रहन सुझाव दिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरस महामारी ‘फेक न्युज मिडिया’ले ठूलो मुद्दा बनाइदिएको आरोप लगाइरहँदा विज्ञहरुले भने कोरोना संक्रमणलाई कमजोर आंकलन नगर्न सुझाव दिँदैआएका छन् ।
अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस लगायत देशमा कोरोना विरद्धको खोप विकासको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले विज्ञ फाउचीले खोपपछिको सम्भावित अवस्थालाई लक्षित गर्दै सुझाव दिएका हुन् ।
Previous Previous post: आज तिहारको अन्तिम दिन भाइटीका लगाइँदै, टीकाको उत्तम साइत ११ : ३७ बजे
Next Next post: अमेरिकाको चेतावनीः चीनलाई तिब्बतमा अर्को दलाई लामा छान्‍ने हक छैन
बेलायत सरकारद्धारा दक्ष कामदार भित्रयाउने प्रक्रिया शुरु, नेपालबाट निवेदन दिन मिल्ने
19 fatalities recorded, Nepal’s death toll hits 1,454
अब अमेरिका आउने भिजिटर भिषाको लागि धरौटी रकमको चहिने
अमेरिकी लोकतन्त्रलाई धमिल्याएर जाने भए ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा सहमत
बेलायत सरकारद्धारा दक्ष कामदार भित्रयाउने प्रक्रिया शुरु, नेपालबाट निवेदन दिन मिल्ने १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८
19 fatalities recorded, Nepal’s death toll hits 1,454 १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८
अब अमेरिका आउने भिजिटर भिषाको लागि धरौटी रकमको चहिने १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८
अमेरिकी लोकतन्त्रलाई धमिल्याएर जाने भए ट्रम्प १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा सहमत १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८
अमेरिकामा पहिलो चरणमा ६४ लाखलाई खोप दिइने १ मंसिर २०७७, सोमबार २०:०८